Hay’ad Turkish ah oo Muqdisho ka furtay Iskuul caruurta Soomaaliyeed lagu barayo xisaabta iyo luuqadaha Carabiga iyo Turkiga | Horn of Africa Observer
Hay’ad Turkish ah oo Muqdisho ka furtay Iskuul caruurta Soomaaliyeed lagu barayo xisaabta iyo luuqadaha Carabiga iyo Turkiga
Axad, Jannaayo 01, 2012 (HAO) − Hay’adda Kimse Yok Mu oo ka mid ah hay’adaha gargaarka Turkiga ee ka howlgalka Magaalada Muqdisho ayaa furtay iskuul caruurta Soomaaliyeed lagu barayo xisaabta iyo luuqadaha Carabiga iyo Turkiga.
Xiriiriyaha hay’addan, Orhan Erdogan ayaa ku sheegay hadal uu ka jeedinayay xaflad lagu furayay iskuulkan oo lagu qabtay Muqdisho in qorshahoodu yahay inay ka dhisaan caruurta Soomaaliyeed maadada xisaabta oo cilmi ah iyo barashada luuqadda Turkiga iyo midda Carabiga.
“Qorshaheennu waa inaan caruurta Soomaaliyeed ka dhisno dhinaca waxbarashada, waxaan doonaynaa in waxyaabaha la barayo ay ka mid noqoto luuqaddeenna,” ayuu yiri Erdogan oo sheegay in iskuulka ay fureen uu qayb ka yahay mashaariicda ay ka hirgelinayaan Soomaaliya.
Mr. Erdogan ma sheegin tirada caruurta dhiganaysa iskuulka, balse wuxuu sheegay in qorshahoodu yahay inay xoogga saarayaan wax baridda caruurta qoysaska barakacayaasha ah ee aan fursadda u helayn waxbarashada.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya, Axmed Caydiid Ibraahim oo isaguna ka hadlay xafladda furitaanka iskuulka ayaa in hay’adaha Turkigu ay mashaariic badan ka fuliyeen gudaha Soomaaliya.
“Turkigu waxay dhiseen iskuullo, isbitaallo, iyo xarumo kale oo waxbarasho, si ay ugu faa’iideeyeen shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan caruurta, mahad ayaana uga celinaynaa dadaalkaas,” ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya.
Hay’ado samofal oo Turki ah ayaa ku sugan Magaalada Muqdisho, kuwaasoo ka shaqeeya dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, quudinta iyo dib dhiska dalka, waxayna sheegeen in mashaariicdooda ay yihiin kuwo muddo fog soconaya.